EnFont Terror waa barnaamij cusub oo websaydh ah oo loogu beddelo noocyada | Abuurista khadka tooska ah
EnFont Terror waa barnaamij app ah oo uu sameeyay naqshadeeye Isbaanish ah taasi waxay kuu ogolaaneysaa inaad abuurto noocyo caan ah oo caan ah. Waxaan dhahnaa ilbiriqsiyo gudahood waad qalloocin kartaa qeyb kamid ah font si aad u sameysato mid kuu gaar ah oo leh natiijooyin yaab leh.
Marka maxay shabakadani qabataa waxaa sameeyay Javier Arce waa in la qaato ilo, laaluushku wuxuu noqon karaa mid xun oo loo beddelo mid gebi ahaanba ka duwan noocyada kale ee shaqada ee aan u baahan nahay. Caqli ahaan waxay leedahay bilicdeeda gaarka ah waxaana loo isticmaali karaa waxyaabo qaas ah.
EnFont Terror waa shaqada uu sameeyay naqshadeeyaha Isbaanishka Javier Arce oo ku yimid ereyadiisa, wax badan kama oga waxa loo yaqaan 'kerning', laakiin wuu sameeyaa go'aansaday inaad sameysato degel kuu gaar ah websaydhka jiilka farta qoraalka.
Iyo runta taas natiijada waa xiiso leh, maaddaama aan wajaheyno degel adeegsanaya biraawsarkayaga si loo abuuro noocyada OpenType ee kuwii ugu yaqiinsanaa ee aad abid arag. Mid kale oo ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ayaa ah sahlanaanta isticmaalka, maaddaama aad isticmaali karto noocyada asalka ah si aad ugu beddelato kuwo kale oo qariib ah ilbidhiqsiyo gudahood.
Waxaan wax walba ku sameyn doonnaa dhowr slider oo wax ka beddelaya qaar ka mid ah xuduudaha si loo gaaro natiijooyin xiiso leh. Haddii aan haysanno samir iyo waqti nagu filan, waxaan abuuri karnaa qaar ka mid ah noocyada runtii indhaha soo jiita. Waxaad si fudud ku heli doontaa, xilligaas, taas dhagsii badhanka «Abuur Font» markaa waxaan ku badbaadin karnaa abuurista cajiibka ah qaab OpenType.
Tijaabo ahaan sida barnaamij webka ah, halkan waa iskuxiraha EnFont xun, in waxay u beddeli doontaa ilahaas la yaqaan nooc isbeddel ah la yaab leh in macquul ahaan shaqooyinka qaarkood ay na caawin karto. Marka way fududaan doontaa inaan ka soocno inta kale. Waan kuu daayey adiga barnaamij kale oo Google ah oo loo yaqaan 'Squoosh' kaas oo aad ku cadaadin kartid sawirada si ay u culeyska ugu yar markay u soo dirayaan degelladaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » Ku abuuro farriimo caan ah oo layaableh noocyo farshaxan leh barnaamijka 'EnFont Terror web app'